Umphathi noma Isiphathi Sefayela: I-Android, iWindows nokuningi ▷➡️ eltecnoanalista
Isiphathi noma Isiphathi Sefayela: I-Android, iWindows nokuningi
Kulesi sihloko, sizokubonisa konke odinga ukukwazi mayelana umphathi wefayela yezinhlelo zokusebenza ezahlukahlukene Iyini?, isebenza kanjani, izinhlobo nokunye okuningi. Qhubeka ufunda ukuze ufunde kabanzi mayelana naleli thuluzi lokuphatha elithakazelisayo nelibaluleke kakhulu.
Un umphathi wefayela iyithuluzi ledijithali elisetshenziselwa ukuphatha kalula nangempumelelo okuqukethwe okugcinwe ezinhlotsheni ezahlukene zesitoreji esingazithola ezinhlelweni zokusebenza, njenge-hard drive, inkumbulo ye-RAM, imemori khadi, phakathi kokunye. Okulandelayo, sibonisa amasistimu nabaphathi abawasebenzisayo:
Izinhlelo ze-IOS ne-Android: Banomphathi wefayela olula futhi osebenza kahle kakhulu.
IWindows: Lolu hlelo luza luphelele ne-File Explorer:
I-Linux: Isinika izinketho ze-Konqueror, Nautilius kanye neDolphin.
Indima yalawa mathuluzi ibaluleke kakhulu emhlabeni wanamuhla wamakhompyutha. Lokhu kungenxa yokuthi ngenxa yazo, singakwazi ukudala, ukuhambisa, ukususa, ukukopisha nokunamathisela okuqukethwe okugcinwe kukhompuyutha, ifoni noma ithebhulethi. Lolu hlelo lokusebenza olubalulekile lokuphatha kahle amafayela, amadokhumenti, izithombe esingazithola ku-a Isixhaxha.
Abanye abantu bancamela ukusebenzisa i-CDM. Kodwa-ke, okwamanje abasebenzisi bahlala behambisa amafayela nolwazi, ngakho-ke kungaba yinkimbinkimbi ukusebenzisa leli thuluzi ukuphatha umsebenzi wansuku zonke, njengoba lingelona elisebenza kahle kakhulu ukuphatha inani elikhulu lolwazi.
Izici eziyinhloko zomphathi wefayela
Njengamanje, abaphathi bamafayela banezici ezibenza babe usizo kakhulu futhi babaluleke kakhulu, badlala indima ebaluleke kakhulu ezinhlelweni zokusebenza ezihlukene futhi ngaleyo ndlela bathuthukise ulwazi lomsebenzisi. Izici eziyinhloko (zamanje) yilezi:
Basinika ukubuka kuqala kokuqukethwe
Vumela ukwabelana ngamafayela kunethiwekhi yendawo
Ngokunjalo, futhi isinika inketho yokuguqula izimvume zefayela
Nikeza inketho yokuphrinta amadokhumenti agciniwe
Ngena ngemvume ezinsizeni ze-FTP
Finyelela kumadrayivu esitoreji esiphathekayo, njengehadiwe
Kucatshangelwa imisebenzi esemqoka ekhombisa a umphathi wefayela okwamanje, okufanele kutholwe, ukuze ivumelane nezidingo zomsebenzisi futhi ihlangabezane nezidingo ezidingayo.
Kunenani elikhulu labantu abadinga umphathi oyinkimbinkimbi kakhulu futhi osebenza ngempumelelo kunalowo ohlinzekwa uhlelo lokusebenza ngokuzenzakalelayo, ngakho-ke, bangena emakethe befuna inketho ehambisana kangcono nemibono yabo yokusebenzisa.
Isiphi isiphathi sefayela esingcono kakhulu seWindows?
Noma ngabe windows umphathi wefayela ingenye yezinto ezisebenza kahle kakhulu kulokhu, abasebenzisi abaningi bakhetha ukucinga izinketho ezihambisana nezidingo zabo. Ngale ndlela, singathola izinketho ezihlukahlukene ezinezici ezizenza zibe ngamathuluzi awusizo kakhulu.
Iwuhlelo olusetshenziswa kakhulu ngabasebenzisi (ngemuva kokuzenzakalelayo olunikezwa yiMicrosoft), nokho, naphezu kokuqanjwa okuningi enabo, lusagcina izinga elifanayo lokusetshenziswa njengeWindows File Explorer. Leli thuluzi linezici ezilandelayo:
Inokusekelwa kwethebhu, okuvumela umsebenzisi ukuthi abe nesipiliyoni esimnandi, njengoba inikeza imininingwane ethile etholakala kumafolda ngendlela elula nephumelelayo.
Ivumela ukutholakala kokufinyelela okuqondile noma izinqamuleli ezingashintshwa kuye ngokuthandwa.
Ukukhipha lolu hlelo kumahhala.
Isiphi isiphathi sefayela esingcono kakhulu se-Mac?
Umphathi wefayela ohlinzekwe yilawa masistimu usungula futhi usebenza kahle kakhulu kulo mkhakha. Lokhu kungenxa yokuthi leli thuluzi lisebenza kanjani kanye nemisebenzi elinayo, okuthi, uma ngikhuluma iqiniso, iqanjwe kakhulu.
Kodwa-ke, kukhona abasebenzisi abanganelisekile ngomkhiqizo ozenzakalelayo amadivayisi we-Mac anawo futhi asebeqala ukubheka izinketho ezintsha ezibasiza ukuthi benze imisebenzi eyinkimbinkimbi ngempela ngendlela efanele. Uma kwenzeka unquma ukucinga ezinye izinhlelo zokusebenza ukwenza lo msebenzi, senza umsebenzi wakho ube lula ngokwethula inketho engcono kakhulu mayelana nokusetshenziswa.
I-Fork Lift 3
Ngalolu hlelo lokusebenza, ngaphandle kokungabaza, uzokwazi ukuba nokulawula okuphelele nokuphatha amafayela agcinwe ohlelweni lwe-Mac. Lokhu kungenxa yemisebenzi yayo eminingi ehlinzeka ngolwazi olugculisa ngempela kubasebenzisi. Izici zayo eziyinhloko yilezi ezilandelayo:
Ivumela amadrayivu wokuqukethwe akude ukuthi akhwezwe ngendlela efanayo neyasendaweni
Vumelanisa izinkomba ngokusebenzisa izindlela ezihlangene ezisebenza kahle kakhulu
Iqukethe imojuli ongashintsha ngayo igama lamafayela amaningana ngesikhathi esisodwa
Inethuluzi lokukhipha izinhlelo zokusebenza, elisebenza kahle kakhulu
Inikeza okuthiwa i-Stack: Lo msebenzi uyindawo lapho, ngokwemibandela eyisisekelo, inikeza inketho yokwengeza amafayela amasha, amafolda, ulwazi, imibhalo, amadiski okugcina, phakathi kwabanye. Lokhu ukuze zihlale zihlelekile futhi zitholakala, ngendlela efana kakhulu nemitapo yolwazi esiyithola ku-Windows.
Kufanele kuqashelwe ukuthi abasebenzisi abafisa ukuthenga lolu hlelo lokusebenza enguqulweni eyethulwa umuntu oyedwa, kufanele bakhokhe inani lamadola aseMelika angamashumi amathathu.
Abanye abaphathi bamafayela kulawa masistimu wokusebenza
Uma amathuluzi asetshenziswa kakhulu abasebenzisi abafuna enye indlela esegqanyisiwe, singaqhubeka nokuqamba ezinye izinketho ngokwezinhlelo eziphethe amafayela. Baphinde banikeze ukusebenza okuhle nezici ezihlinzeka ngemisebenzi emihle kakhulu.
Isiphathi Sefayela seWindows
Kulolu hlelo lokusebenza namakhompyutha alo singathembela kumphathi wefayela obizwa ngokuthi i-Cubic Explorer, nayo ene-Better Explorer. Zombili lezi ezinye izindlela ezinhle kakhulu zabasebenzisi abafuna ukuzama ezinye izinhlelo zokusebenza zalolu hlobo. Okulandelayo, sizokwethula imisebenzi esemqoka enikezwa yilowo nalowo kubo:
I-CubicExplorer: Kulolu hlelo lokusebenza oluthokozisayo singathola imisebenzi ehlukahlukene eyenza kube ithuluzi eliwusizo kakhulu, njengenketho yokusekelwa yokuphequlula ngamathebhu, ukubuka kuqala kwefayela, isihlungi sokusesha, futhi ikuvumela ukuthi uguqule ukubonga kombhalo kumhleli ohlanganisiwe, phakathi kokunye okusebenzayo. izici ezithuthukisa umsebenzi we indlela yokuphatha amafayela kukhompyutha.
I-BetterExplorer: Isebenzisa i-Ribbon tape kusixhumi esibonakalayo sayo, ifana naleyo eyenziwa yimikhiqizo ehlinzekwa yi-Office. Iphinde ibe nezinye izici ezikwenza kube uhlelo lokusebenza olufunwa abasebenzisi emhlabeni jikelele, ukuphatha ngempumelelo konke okuqukethwe okugciniwe, okufana namafolda, Amanothi asheshayo, umculo, imibhalo, izithombe, phakathi kokunye..
Kulezi zinhlelo zokusebenza singathola izinhlobo ezimbalwa zabaphathi bamafayela abahlukile, nokho, abanayo imisebenzi efana neyeWindows, futhi ayihlukanga. Nokho, singathola izinketho eziwusizo kakhulu, njenge-Path Finder. Leli thuluzi liqukethe izici ezithakazelisa kakhulu, okuyinhloko ukuthi kungenzeka ukusebenzisa Izitaki, ukuphequlula kumathebhu, phakathi kokunye.
Este umphathi wefayela Inobubi obuthile obuhlobene nokuthi ijwayele ukusebenzisa izinsiza eziningi, uma iqhathaniswa nabanye abaphathi, umehluko uyamangalisa. Akumahhala, ngoba ukuze uyisebenzise, ​​​​izindleko zamadola aseMelika angamashumi amathathu nesithupha kufanele zikhokhelwe kuqala. Kodwa-ke, ngaphandle kwalezi zimo ezimbi, kusengenye yezinketho ezinhle kakhulu zabasebenzisi abanezinhlelo ze-MacOS.
Isiphathi Sefayela se-Android
Uhlelo lokusebenza lwe-Android lungenye yezindlela ezihamba phambili nezisetshenziswa kakhulu emhlabeni, abantu abaningi bangabanikazi bemishini enohlelo olushiwo. Lokhu kungenxa yokusebenza kwayo, ukuhlukahluka okukhulu kwezinhlelo zokusebenza ezinikezayo, imahhala futhi inekhodi evulekile.
Ngale ndlela, abathuthukisi abaningi bangathola kule nkundla enhle kakhulu, lapho bangaklama futhi banikeze izinhlelo zokusebenza kubathengi abazokwazi ukuzilanda futhi bazisebenzise ngesikhathi esithile.
Ukuze uthole ukusebenza kahle eqenjini, kubaluleke kakhulu ukuthi ungathembela ku-a umphathi wefayela kahle esisethula ngezinketho zokunika amandla, ukulungisa, ukuhlela, ukuhambisa, ukuqamba kabusha amafayela namafolda asendaweni yokubeka idivayisi. Naphezu kweqiniso lokuthi izinketho ezihlukahlukene zingatholakala ku-Playstore, iningi lazo alihlangabezani nokulindelwe ngabasebenzisi.
Imenenja yefayela ye-Astro
Este Imenenja yefayela le-Android, ngokuyisisekelo iyithuluzi elinikeza ithuba lokuphatha noma yiliphi ifayela, nokho, ngokuvamile lisetshenziselwa ukuhlela izithombe, amavidiyo, umculo, konke kumadivayisi aphathwayo. Phakathi kwamafayela angaphathwa kukhona:
Okuqukethwe kwamukelwe futhi kwathunyelwa nge-Bluetooth
Uma ungomunye walabo basebenzisi abafuna umkhiqizo omuhle, lena inketho enhle kakhulu yokwenza imisebenzi yokuphatha amafayela edijithali. Ngaphandle kokungabaza, enye yezindlela ezingcono kakhulu kulo mkhakha zamadivayisi anohlelo lwe-Android.
I-Astro File Manager iwuhlelo lokusebenza olungajwayelekile lokuphatha amafayela nokuqukethwe ngaphakathi kwamadivayisi anezinhlelo ze-Android. Leli thuluzi lokusungula linikeza ithuba lokuphequlula nokuphatha konke okuqukethwe okugcinwe kukhompuyutha ngendlela ehlelekile.
Ngokufanayo, ikuvumela ukuthi uphathe izithombe, amavidiyo, umculo, amadokhumenti, phakathi kwabanye. Inikeza izinga eliphezulu lenkonzo njengoba izingxenye ezihlukahlukene eseziqanjwe zingagcinwa zihlelekile.
Leli thuluzi alimahhala ngokuphelele, nokho, linikeza inombolo enkulu yezici ezinikeza umsebenzisi ukulawula amafayela agcinwe kudivayisi yakhe ye-Android. Imisebenzi yayo eyinhloko yilena elandelayo:
Ivumela ukukopisha nokunamathisela okuqukethwe
Shintsha igama lamafayela
Gcina amafayela kulokho okubizwa ngeziqukathi ze-ZIP
Iphinde ibe nezici ezintsha ezihambisana nalolu hlelo lokusebenza ukulwenza lube olunye oluwusizo kakhulu emakethe. Okuyinhloko nokusetshenziswa kakhulu ukuthi kungenzeka ukuzulazula ngendlela elula lapho uhlanganisa, ukopisha futhi unamathisela okuqukethwe okugciniwe, njengalokho okutholakala kumemori khadi ye-SD.
Iphinde inikeze inketho engavamile, ebhekisela ekutheni kungenzeka ukusebenzisa umphelelisi odingekayo ukusakaza okuqukethwe ngamanethiwekhi e-Windows, Bluetooth kanye ne-SFTP. Nokho, singagqamisa ezinye izici eziphawulekayo ezifana nalezi:
Ukuphatha okulula nokusebenzayo: Lesi sici sihlanganisa yonke into ehlobene nokukopisha, ukuhambisa, ukunamathisela, ukulungisa igama, ukususa, ukwenza amakhophi ayisipele, phakathi kokunye.
Amanethiwekhi nendlela yokwabelana ngawo: Ungasakaza amafayela agcinwe kudivayisi nge-Bluetooth usebenzisa inethiwekhi ye-Windows, futhi kwenza kube nokwenzeka ukwenza izenzo zokulondoloza ezihlobene Ungalayisha kanjani ifayela ku-Google Drayivu, basindise efwini, phakathi kwabanye.
Lolu hlelo lokusebenza luyithuluzi eliwusizo kakhulu, lapho singathola khona amafayela ahlukahlukene nokuqukethwe kwawo agcinwe kumakhompyutha analolu hlelo lokusebenza. Lokhu kungenxa yemisebenzi ehlukahlukene nezici enazo, eziyenza ikwazi ukuhlela konke okuqukethwe okugcinwe ocingweni ngendlela efanele futhi ngaphandle kokuphazamiseka okukhulu.
I-Root Explorer File Manager
El umphathi wefayela I-Root Explorer ingenye yezinhlelo zokusebenza ezaziwa kakhulu kule ndawo. Njengoba inamakhono anele okuthola nokuphatha kahle konke okuqukethwe yidivayisi. Ngokunjalo, futhi ivumela umsebenzisi ukuthi athole futhi aphathe amafayela ayinkimbinkimbi kakhulu ukuze awathole kumakhompyutha anohlelo lokusebenza lwe-Android. Izici zayo eziyinhloko yilezi:
Phatha imininingwane yolwazi ye-SQLite.
Yenza imisebenzi yayo ngokuhlanganyela nomhleli wombhalo.
Dala futhi ukhiphe amafayela acindezelwe nokuqukethwe kwezinhlobo ezahlukahlukene, njenge: Tar, zip ne-gzip.
Khipha amafayela usebenzisa izandiso zohlobo lwe-rar.
Ivumela ukusetshenziswa kwemiyalo yosesho elandelanayo.
Phatha amabhukumaka atholakala kusiphequluli.
Ivumela inketho yokwabelana ngamafayela nge-imeyili yomsebenzisi.
Iphinde inikeze inketho yokwabelana ngazo nge-Bluetooth.
Izakhiwo zefayela ezijwayelekile zingahlelwa.
Ukuze ulande lolu hlelo lokusebenza, kufanele kukhokhwe inani lamadola aseMelika amathathu. Nokho, lolu hlelo lungolunye olusetshenziswa kakhulu abantu abanolwazi olunzulu ohlelweni lwe-Android. Lokhu kungenxa yemisebenzi eminingi nezici ezinikezayo.
Ifayela le-EX Hlola
Lolu hlelo lokusebenza lokuphatha ifayela kulula kakhulu ukulisebenzisa, ngoba lunikeza imisebenzi eyisisekelo kodwa ephumelelayo ekwazi ukuhlela amafayela nemisebenzi kudivayisi ngendlela efanele. Ine-interface ecacile kakhulu futhi ezenzakalelayo, elungele amakhompyutha aphathekayo.
Lolu hlelo alunikezeli kuphela ithuba lokuphatha konke okuqukethwe kwedijithali okugcinekayo kwedivayisi yethu ngendlela elula nephumelelayo, kungenzeka futhi ukusungula ukuvumelanisa phakathi kwemishini ephathekayo, njengezingcingo, amakhompyutha aphathwayo, i-FTP, phakathi kwabanye, ukuze ukwabelana, ukulanda noma ukukhipha okuqukethwe.
Uma kwenzeka ufuna ukwabelana ngamafayela, lolu hlelo lokusebenza lunikeza izinketho ezihlukahlukene, phakathi kwazo okulandelayo okuvelele: 3G, EDGE, WI-FI. Lokhu kusiza kakhulu lo msebenzi, ngaleyo ndlela kubhaliswa indlela elula kakhulu yokusabalalisa okuqukethwe okufunayo.
Abasebenzisi abaningi abangabanikazi bemishini enohlelo lwe-Android bavame ukwabelana ngokuqukethwe okugciniwe, okufana nomculo, izithombe, amavidiyo, phakathi kokunye. Ngale ndlela, inqwaba yabo ingena emakethe ifuna isicelo esihlangabezana nezidingo ezidingekayo zokwenza lo msebenzi ngokushesha, kalula futhi okuveza ulwazi oluhle ekuthuthukisweni kwawo.
Inezici ezihlukahlukene kanye/noma imisebenzi ekwenza kube inketho enhle yokuphatha amafayela agcinwe kudivayisi ngohlelo lokusebenza lwe-Android. Ngokufanayo, kungenye indlela enhle kakhulu uma ufuna ukwabelana ngokuqukethwe kalula nangokushesha. Ngezansi sizokukhombisa izici eziyinhloko zesiphathi sefayela:
Ikhono lokwabelana ngokuqukethwe nge-WI-FI usebenzisa i-FTP.
Ukuze wabelane ngalawa mafayela, akudingekile ukuba nesixhumi se-USB, ngoba sinikeza inketho yokwenza lo msebenzi ngokusebenzisa inkinobho elula ebizwa ngokuthi "Yabelana".
Kumele kuqashelwe ukuthi uma ufuna ukulanda lolu hlelo lokusebenza, kufanele ukhokhe inani elithile, noma kunjalo, linenguqulo ekhululekile ngokuphelele. Nokho, lokhu kwakamuva kuqukethe izikhangiso eziningi, kodwa akuthinti ukusebenza kohlelo nhlobo.
Lolu hlelo lokusebenza lungolunye oluyisisekelo futhi olusebenziseka kalula. Lulungele labo basebenzisi abangenalo ulwazi oluningi ngamadivaysi aphathwayo e-Android. Nokho, iyasebenza kakhulu futhi iyasebenza, njengoba inezici eziyenza ibe uhlelo olufanele kanye nenketho enhle kakhulu lapho ufuna omunye umlawuli. Izici zayo eziyinhloko yilezi ezilandelayo:
Inikeza ithuba lokwenza umsebenzi othuthukisiwe ngendlela elula.
Phatha imisebenzi futhi uyihlele kusukela kwelula kakhulu kuye kweyinkimbinkimbi kakhulu.
Ukufinyelela kalula kumemori khadi ye-SD etholakala ocingweni.
Iphinde inikeze izinketho zokukopisha, ukunamathisela, ukulungisa, ukuqamba kabusha, ukuhambisa nokususa.
Vula amafayela e-zip.
Dala izinqamuleli noma izinqamuleli.
Ivumela umsebenzisi ukuthi afihle amafayela.
Ngale ndlela singagqamisa ukuthi naphezu kohlobo lwayo lokusebenzisa oluyisisekelo, inemisebenzi ewusizo kakhulu nemangazayo ngempela, enikeza umsebenzisi ulwazi olufanele nolwanelisayo lapho ekhetha lokhu okuhlukile njengomphathi wefayela kudivayisi yakhe ephathekayo.
I-FX File Explorer
Lolu hlelo lokusebenza lungaba indawo ekahle yomphathi wefayela i-Android esinikeza yona ngokuzenzakalela. Lokhu kungenxa yezici i-FX File Explorer enazo, eziwusizo kakhulu. Imisebenzi yayo eyinhloko yilena elandelayo:
Kungenzeka ukuhlukanisa isikrini sibe amawindi amabili.
Amafayela amaningi noma amafolda angakhethwa futhi ahanjiswe.
Amafayela angabukwa ngemiklamo ehlukene, esiyithola kunketho ethi "Buka uhlobo".
Indlela yokusesha elula kakhulu futhi ezenzakalelayo.
Inomhleli wombhalo ohambisanayo.
Uma ufuna ukuzama lolu hlelo lokusebenza oluthokozisayo, ungalulanda ngaphandle kokuphazamiseka okukhulu njengoba ukulanda kumahhala ngokuphelele. Ngakho-ke izotholakala kubo bonke abasebenzisi.
Umphathi wefayela ubaluleke kakhulu kumasistimu wokusebenza ahlukahlukene. Njengoba sibonga, i-oda elihlelekile lingagcinwa kumafayela eqembu, livumela ithuba lokuthola okuqukethwe ngendlela elula futhi ngaphandle kobunzima obuningi. Isinika ithuba lokwabelana ngokuqukethwe, ukukulayisha efwini noma ukukusakaza kumanethiwekhi ahlukahlukene kanye nezinketho eziningi ezintsha. Ngaphandle komphathi, ukulawula okuphelele kokuqukethwe okugciniwe akukwazanga ukugcinwa.
I-DNS Propagation: Kuyini? Kuthatha Isikhathi Esingakanani? futhi nokuningi
Januwari 7, 2021
Hlangana ne-Inkjet noma Iphrinta ye-Inkjet
Izindiza ze-Google; Kuyini?Kusebenza kanjani?
Ungawenza kanjani umkhankaso we-crowdfunding ophumelelayo?